Abameli be-Miss Miss Admissions: UMTHETHO WESIKOLO, I-Acceptance Rate
Iimviwo zeeNyuvesi zeSouth University of Southern Mississippi.
Ngomlinganiselo wokwamkeleka we-60%, ukungeniswa kwe-Southern Miss kuphakathi kokukhethiweyo kwaye kuvule ngokupheleleyo. Abafundi abaneempawu ezifanelekileyo kunye namanqaku okuvavanya banethuba elihle lokuvunyelwa esikolweni. Ngokuhambisana nesicelo, abafundi abanomdla baya kufuna ukuhambisa imiqulu ebhaliweyo yezikolo eziphezulu kunye namanqaku avela kwi-SAT okanye UMTHETHO.
Ukuba unemibuzo, i-ofisi yokungena kwi-Southern Miss ingakunceda.
IYunivesithi yaseMzantsi Mississippi Ukwamkela: 60%
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 430/540
ISAT Math: 510/650
I-SAT ukulinganisa amanqaku kwiikholeji ze-Mississippi
I-S-USA SAT ifayili yokufanisa
UMTHETHO UMathe: 17/24
Ukufanisa amanqaku kwiikholeji ze-Mississippi
I-C-USA UMTHETHO wesilinganisi
IYunivesithi yeSouth Mississippi Inkcazo:
USouthen Miss, iYunivesithi yeSouth Mississippi, iyunivesithi kawonkewonke e-Hattiesburg, Mississippi. I-Miss Miss izuza amanqaku aphakamileyo kwiziko lazo leMfundo leZwelonke, eliququzelela ukufundwa kwamanye amazwe amathuba okuba abafundi abaninzi. Inkqubo yehlobo laseLondon ibaluleke kakhulu. Kwi-front front academic, iyunivesithi iye yabona kakuhle iiprogram yesayensi yepolymer, imfundo kunye nomculo.
Abafundi abaphumeleleyo kufuneka bahlole iKholeji ye-Honors yeyunivesithi. Ngaphandle kweklasini, iNtshonalanga yaseMzantsi inika uluhlu lwemisebenzi kunye namaqela, ukusuka kwezobugcisa ukuya kwii-athletics ukuya kwiiklabhu zemfundo ukuya kumsebenzi wenkonzo yoluntu. Kwiimidlalo, i-Southern Miss Miss Eagles incintisana kwiCandelo le-NCAA I-Nkomfa yase-USA.
Ubhaliso lwabonke: 14,552 (11,779 abafundiswe phantsi)
Imfundo kunye neeMali: i-$ 7,659 (kwi-state); $ 16,529 (ngaphandle kwe-state)
Igumbi neBhodi: $ 9,012
Ezinye iindleko: $ 3,570
Iindleko ezipheleleyo: i-21,441 i-$ (in-state); $ 30,311 (ngaphandle kwemeko)
IYunivesithi yaseMzantsi Mississippi Uncedo lwezeMali (2015 - 16):
Ipesenteji yabafundi abafumana uncedo: 97%
Izibonelelo: $ 9,770
Imali: $ 6,267
I-Popular Majors: I- Biology, uLawulo lwezoShishino, iMfundo eQalayo, iMpilo kunye neMfundo yezeMvelo, ukuThengisa, ukuNyango, iNzululwazi
Imidlalo Yabantu: Ibhola, Ibhola, iGalofu, iTayiti, Umkhondo kunye neNgingqi, ilizwe eliphambeneyo
Imidlalo yabasetyhini: I- Softball, iVolleyball, iBhola lebhola, iGalofu, iThenti, iNgcahla, iMzila kunye neNgingqi
Ukuba Uthanda iYunivesithi yaseMzantsi Mississippi, Unako ukungafani nalezi zikolo:
IYunivesithi yaseBelhaven: iProfayili
Ikholeji yaseTougaloo: iProfayili
I-Alabama State University: Iprofayili | I-GPA-SAT-ACT IGrafu
I-Alcorn State University: Iprofayili
Ikholeji yaseMillsaps: iProfayili
Iikholeji eziPhambili kunye neeYunivesithi
I-Kenyon College Profile Admisions
I-Admission University Admissions
Funda iMilinganiselo yeSizwe ye-SAT ye-2013
Benza Woodstock Yenzeke
I-Ecology Essay Iingcamango
Imithetho yeMitshato Yomtshato Wembali Umlando & Isihlandlo
Izigebengu eziMazwe eziNtshontsho eziNtshontsho zakwaNazi eza eMzantsi Melika